Fizahan-tany Kambodza | Vaovao momba ny dia
Kambodza dia fanjakana izay ao amin'ny Azia atsimo atsinanana ary iray amin'ireo perla fizahan-tany manodidina azy, miaraka amin'i Thailand. Saika tsy azo atao ny mitsidika firenena iray raha tsy mitsidika ny iray hafa. Na, maninona ary, Vietnam mpifanila vodirindrina aminy koa.
Izany dia toerana fizahan-tany mahafinaritra, noho ny endrika kanto, ny tantaram-piainany, ny gastronomie ... be dia be ny lisitra. Ka anio, ny toerana tsara indrindra halehantsika mieritreritra dia Kambodza sy ny harena ao aminy.
Araka ny efa nolazainay, Kambodza fanjakana miorina io any amin'ny faritra atsimon'ny saikinosy Indochinese miaraka amin'ny mifanila amin'i Thailand, Laos ary Vietnam. Olona manodidina ny 15 tapitrisa no monina ao aminy izay manao fampiharana, manodidina ny 95%, ny Buddhist Terevada. Ny tanàna lehibe indrindra sy ny foibe ara-kolontsaina, politika ary toekarena dia ny tanànan'i Phnom Penh.
Noho izany, tsy misy tsara noho ny fanombohana ny fitsidihantsika an'ity tanàna ity izay mety, vavahadintsika. Ny tanana eo amin'ny fihaonan'ny renirano telo no misy azy Noho izany dia mizara ho sehatra telo izy: ny atsimo dia ny faritra frantsay, kanto be miaraka amin'ny banky sy ny masoivoho ary hotely, eo afovoany no misy ny tsena sy ny lalan-kely ary ny avaratra ny faritra onenana maoderina.
Inona no tokony ho fantatra ao Phnom Penh? El Royal Palace Izy io dia tranokala mahafinaritra miaraka amin'ny Buddha maintso goavambe vita amin'ny volamena matevina sy ny kristaly Baraccarat ary milanja 75 kilao. Izy io koa dia misy diamondra sy vatosoa hafa. Manodidina ny lapam-panjakana, naorina tamin'ny 1866, dia misy rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina ary tranobe tsara tarehy azo tsidihina.
Tokony ho fantatrao koa ny Tsangambaton'ny Fahaleovantena, nanomboka tamin'ny 1958, izay tandindon'ny fahaleovantenan'i Frantsa mahatadidy ireo izay maty ho azy. Etsy ankilany dia misy ny National Museum, avaratry ny Royal Palace, izay misokatra isan'andro. Any avaratra atsinanana dia Wat phnom, eo amin'ny havoana misy ala 30 metatra ny haavony. A pagoda miaraka amin'ny sarivongana Buddha efatra nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
La Fonja Tuol Sleng tranom-bakoka ankehitriny fa sekoly ambaratonga faharoa kosa taloha. Taty aoriana, tamin'ny taona 70, dia lasa a foibe fampidirana sy fampijaliana. Ampio ny Tsena afovoany, ny Tsenan'i Tuol Tom Pong, voantso tsena rosiana, ary amin'izany sy ny diabe tsara dia voasaronao ny tanàna.
Mazava ho azy fa tsy afaka miresaka momba an'i Kambodza isika raha tsy miresaka Valan-javaboahary Angkor. Tokony handahatra ny fitsidihana ianao satria malalaka ny tranokala. Mety ny ho tonga aloha mba hanana ora mazava, ankoatr'izay, miditra amin'ny fidirana lehibe ary fantaro fa ny tempoly dia nalamina araka ny teboka efatra amin'ny kompà. Hahazo ny sary tsara indrindra ianao amin'ny maraina, fa amin'ny lafiny hafa any Angkor Wat no misy ny hazavana tsara indrindra amin'ny tolakandro.
Mila mitsidika an'i Angkor ianao, Angkor Pass, izay ahafahanao manome anao mitsidika tempoly isan-karazany ao amin'ny valan-javaboary arkeolojika. Vidina amin'ny vavahady lehibe amin'ny lalana mankany Angkor Wat izy io. Misy mandalo iray andro, telo andro ary fito andro. Misokatra manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 6 hariva ny valan-javaboary.
Tanàna sy arkeolojia, nefa koa Fantatra amin'ny torapasika nofinofisiny i Kambôdza. Araka izany, ny iray amin'ireo malaza indrindra dia Sihanoukville: fasika fotsy, rano mafanaavy any amin'ny Hoalan'i Thailand, rivo-piainana milamina, tropikaly be daholo.
Naorina tamin'ny faramparan'ny taona 50 izy io ary tsy mitovy amin'ny tanàna na tanàna hafa ao amin'ny firenena satria cosmopolitan kokoa ary an-tanan-dehibe kokoa, na dia noho ny tanàn-dehibem-paritany hafa aza. Misy fizahan-tany be dia be, saingy milamina ihany ny atmosfera. Ny ankamaroan'ny tora-pasika dia manolotra elo hofaina, trano fivarotana sakafo, hotely, bungalow ary trano fisakafoanana. Hitanao amin'ny hotely kintana 5 ka hatramin'ny trano fandraisam-bahiny.
Misy koa a mirary fiainana soaIndrindra ao amin'ny Weather Station Hill na Victory Hill, izay misy ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny mora vidy indrindra. Misy bara ihany koa eny amoron-dranomasina isan-karazany sy eo afovoany. Toerana fanofana moto io satria tsy dia kely akory ny fivezivezena mandeha tongotra.
Raha tsy ny morontsiraka ny zavatrao fa ny fizahantany eco, dia tsy maintsy ao ny dianao Rattanakiri. Izy io dia faritany iray 636 kilometatra miala an'i Phnom Penh, vitsy mponina ary fantatry ny tontolo voajanahary: tendrombohitra sy havoana, farihy volkano, renirano, riandrano, ala. Ny dia an-tongotra voatondro dia andro maromaro ary ao anatin'izany ny fanaovana fitsidihana tanàna, fitsidihana ny farihy Yeak Loam, fivoahana amin'ny alina, fitsidihana an'i Ceal Rumplan na fitsangantsanganana amoron'ny renirano Sre San mitsidika tanàna vitsivitsy eo anilany, ny Lumphat Wildlife Sanctuary, ny Virachay National Park.
Ary tsy tokony havela hivoaka amin'ny fitsidihana izany Andoung Meas na ny Golden Springs, fambolena kafe na fingotra sasany, ny Riandranon'i Katieng, ny riandrano Ou'Seanlair na ireo toeram-pitrandrahana vatosoa sarobidy. Misy vanim-potoana orana, manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra. Farany, tsy maintsy raisina izany Rattanakiri ihany no azon'ny tany ary rehefa tonga any ianao dia tsy maintsy mihetsika amin'ny fiara, môtô, sambo na elefanta. Inona no safidinao?
Ary farany, tanàna iray hafa: tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena: Battambang, tany fambolena vary ary Khmer Rouge. Io no ifandraisan'ny Kambodza sy Thailand ary manana maritrano frantsay maro.
Anisan'ny manintona hotsidihina ny Tempolin'i Barseat arivo taona izay, ny Tempolin'i Wat Ek tamin'ny taonjato fahiraika ambin'ny folo, ny Tempolin'i Ba Nam bebe kokoa na latsaka avy amin'ny fotoana iray ihany, Prasat nipitika ary ny stupas-biriky telo ao an-tampon-kavoana sy ny kaominin'i Phnom Sam Pov, Boeng Kam Pinh Puoy ary Sek Sak, izay samy manana ny hatsaran-tarehy voajanahary.
Araka ny hitanao dia mety mieritreritra tora-pasika ianao rehefa mieritreritra an'i Kambôdza fa ny marina dia toerana tsara hivadihana ny dianao ho lasa traikefa feno tantara, kolontsaina ary natiora mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Kambodza » Fizahan-tany Kambodza
Inona no ho hita any Puerto de la Cruz, Tenerife